Rw LCZ696 ntụ ntụ (936623-90-4) hplc≥98% | AASraw R&D Reagents
/ ngwaahịa / Ndị R & D mmeghachi omume / LCZ696 ntụ ntụ (936623-90-4)
Rating: SKU: 936623-90-4. Category: Ndị R & D mmeghachi omume
Usoro Molecular: C24H29N5O3.C24H29NO5.5/2H2O.3Na
Molekụla arọ: 915.98
• Obere ọgwụ ACE ma ọ bụ ọgwụgwọ ARB: obere ACE inhibitor nhata: enalapril <= 10 mg kwa ụbọchị, obere ọgwụ ARB dị ala: valsartan <= 160mg kwa ụbọchị
• Ọrụ mgbazinye siri ike (GFR <30ml / min / 1.73m 2)
(4) Ọrụ akụrụrụ dị nro: LCZ696 ntụ ntụ (sacubitril / valsartan ntụ ntụ) bụ onye na-egbochi RAAS; ya mere, mbelata nke akụrụ nwere ike ịtụ anya na ndị ọ bụla nwere nnukwu nsogbu gụnyere ndị nwere akwara akwara stenosis. N'ime oge okpukpu abụọ nke PARADIGM-HF, 5% nke ndị a na-emeso ya na LCZ696 ntụ ntụ (sacubitril / valsartan ntụ ntụ) na enalapril kwuru na akụrụ na-adaba dị ka ihe ọjọọ. Na mgbakwunye, mmụba na Scr> = 50% hụrụ na 16% nke ndị a na-agwọ ma ntụ LCZ696 (sacubitril / valsartan powder) na enalapril. A ga-enyocha ọrụ gbasara akụrụngwa nke ọma na ntụ ntụ LCZ696 (sacubitril / valsartan powder) kwesịrị belata ma ọ bụ kwụsị maka nrịanrịa nke ahụike na-arụ ọrụ akụrụ.
(5) Hyperkalemia: Site na mmetụta ya na mgbochi RAAS, ntụ ntụ LCZ696 (sacubitril / valsartan ntụ) nwere ike ibute hyperkalemia. N'ime oge okpukpu abụọ nke PARADIGM-HF, 12% nke ndị ọrịa na-agwọ LCZ696 ntụ ntụ (sacubitril / valsartan ntụ ntụ) kọrọ mmetụta ọjọọ nke hyperkalemia. Tụkwasị na nke ahụ, a na-ahụta ihe ndị na-enye potassium> 5.5 mEq / L na 16% nke ndị a na-agwọ ma ntụ LCZ696 (sacubitril / valsartan powder) na enalapril. A na-adụ ndị na-arịa ọrịa nwere nsogbu dị nso dị ka nkwarụ dị ukwuu, ọrịa shuga, hypoaldosteronism, ma ọ bụ nri potassium dị elu. Obelata ma ọ bụ ịkwụsị ọgwụ ahụ nwere ike ịdị mkpa maka mmụba nke ahụike na potassium.